प्रमोद खरेल Archives - Purbeli News
झापा / गायक प्रमोद खरेललाई झापाको कचनकबल गाउँपालिकाले सद्भावना दूत नियुक्त गरेको छ । नेपालको सबैभन्दा होचो स्थानमा रहेको सो गाउँपालिकाले पर्यटकीय प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गर्दै सोही ठाउँमा जन्मेका गायक खरेललाई चौथो गाउँसभाबाट सद्भावना दूत नियुक्त गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अञ्जार आलमले बताउनुभयो । सो गाउँपालिकामा कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर...
चिप्लेढुङ्गा / ‘मबिना कसै–कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा ।’ शुक्रबार पोखरा सभागृहको स्टेजमा पछिल्लो पुस्ताका लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेल उत्रिए । सङ्गीत पारखीहरुको बेजोड ताली र ‘हुटिङ’बाट उनको स्वागत भयो । गायक खरेलले गीतका सर्जक शीतल गिरीलाई पनि स्टेजमा बोलाए ‘शीतल पनि चिनिनु पर्छ’ भनेर चिनाए दर्शकलाई । गीतसङ्गीतमा जति धेरै आवाज र ताली सुनिन्छ, गायकलाई उत...
काठमाडौं / गायक प्रमोद खरेलको स्वरमा रहेको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । बिहिबार गायक प्रमोदकै अफिसियल युट्युब च्यानलबाट 'यो कुरा गोप्य' बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक उक्त गीतमा आशिष अविरलको संगीत तथा एक नारायण भण्डारीको शब्द सुन्न सकिन्छ । गीतको एरेन्ज अविरलले नै गरेका हुन् । 'यो कुरा गोप्य' निकै रमाइलो र डान्सिङ गीत भएको प्रमोदले बत...
काठमाडौं / दि भ्वाइस अफ नेपालका काेच तथा गायक प्रमोद खरेल कार्यक्रमको अबधिमा नै धुरुधुरु रुन पुगेका छन् । उनलाई प्रतियोगी अमित थापा मगरले कार्यक्रममा नै रुवाएका हुन् । मोरङको बिराट चौकबाट आएका अमित थापा मगर स्टेजमा नै रुन पुगेपछि गायक प्रमोद पनि साथै रुन पुगेका हुन् । उनी प्रतियोगितामा छनौट हुन नसकेपछि निराश भएका अमितलाई हेरेर धुरुधुरु रुन पुगे...
काठमाडौं / चर्चित रियालिटी शो ‘टिभिएस अपाचे दि भ्वाइस अफ नेपाल’ कार्यक्रममा निर्णायक प्रमोद खरेलले गायिका अभया सुब्बासँग माफी माग्नुपरेको छ । गायक प्रमोद खरेलले गायिका अभया सुब्बा ‘टिभिएस अपाचे दि भ्वाइस अफ नेपाल’ कार्यक्रमकै बिचमा कान समातेर माफी माग्नुपरेको हो । उनले ‘टिभिएस अपाचे दि भ्वाइस अफ नेपाल’ कार्यक्रम आइतवार चलिरहेको बेलामा नै कार्यक्रम...
काठमाडौँ / नेपालि सुगम संगीतका चर्चित गायक प्रमोद खरेलको आवाजमा रहेको एक निकै नै मर्मस्पर्शी गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । कोशी पुर्वको ईटहरि र मोरंगको बृन्दाबन गौशालाको रमणीय स्थानहरुमा छायांकन भएको गीतको भिडियोमा प्रेम पीडालाई प्रस्तुत गरिएको छ । ‘पैले माया’ बोलको गीतलाई गीतकार सालिक ओली क्षेत्रीले लेखेका हुन् । गीतलाइ रमेश श्रेष्ठले सं...
ईटहरी/ खानाका परिकारहरुलाई विशेष मध्यनजर गर्दै ईटहरीमा पहिलो पटक आयोजना भएको ‘ईटहरी फुड फेस्टिभल’को साझ आज सुगम संगीतका चर्चित गायक प्रमोद खरेलको प्रस्तुती रहने भएको छ । देश बिदेशका स्टेज कार्यक्रममा निकै ब्यस्त प्रमोदले फेस्टिभल सुरु भएको पाचौं दिन आज आफ्नो चर्चित गीतहरुले ईटहरीबासीहरुलाई नचाउनेछन् । उनको ‘म बिन कसैकसैलाई मुस्किल छ पोखरामा’ चर्चित...
काठमाडौं/ गायक प्रमोद खरेलको स्वरमा ‘पागलपन’ एल्बममा समावेश रहेको नयाँ सेन्टिमेन्टल गीत ‘उदास हुन्छु’ सार्वजनिक भएको छ । प्रेम र विजोडको पललाई समेटेर कैद गरिएको भिडियो आईतबार साँझ मात्रै सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक भिडियोमा अर्जुन श्रेष्ठ र सपना भेटवाललाई फिचरिङ गरिएको छ । हेर्नुस् भिडियो । लालबहादुर तामाङको शब्द, लोकनाथ सापकोटाको रचना र...
काठमाडौं / गायक प्रमोद खरेलको नयाँ गीत ‘दन्तैमा’ सार्वजनिक भएकाे छ । मगंलबार सार्वजनिक उक्त भिडियाे युवा गायक खरेलको आफ्नै अफिसियल युट्युब च्यानल ‘सिंगर प्रमोद खरेल’ बाट रिलिज गरिएको हो । दीक्षा क्रियसनको प्रस्तुती रहेको यो गीतका कम्पोजर शंकर स्माइलले गरेका हुन् भने गीतको रचना डिपी खनालले गरेका हुन् । साथै यस गीतमा सुनील क्षेत्री, प्राञ्जली सापको...
गायक प्रमोद खरेलको गाडीले युवतीलाई ठक्कर दिएपछि…
काठमाडौं / एक युवती गाडीमा ठोक्किन आइपुग्छिन् । यी सुन्दरी ठोक्किन आइपुगेको गाडी चर्चित गायक प्रमोद खरेलको थियो । गाडीले ठक्कर दिएपछि के हुन्छ ? प्रमोदले कसरी वचाउलान् उनलाई ? अस्पताल लैजान्छन् कि वाटोमा नै ठीक हुन्छ ? यी तमाम खुल्दुली मेटाउन गायक खरेलको चाँडै सार्वजनिक हुन लागेको गीतको भिडियोमै हेर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् यो दृश्य हो, गायक प्रम...